Ny andraikitry ny fonosana entam-barotra
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-20
Amin'ny ankapobeny, ny vokatra dia mety manana fonosana maromaro. Matetika ny kitapo misy paosy nify dia misy baoritra ivelany, ary boaty baoritra dia tokony hapetraka ivelan'ny baoritra ho fitaterana sy fikirakirana. Ny fonosana sy ny fanontana amin'ny ankapobeny dia manana asa efatra samy hafa. Androany, ny tonian ...
Fanontam-pirinty sy fonosana: ohatrinona no fantatrao momba ny fanasokajiana kitapo fonosana
Mora entina ny kitapo fonosana ary azo ampiasaina hihazonana entana. Fitaovana famokarana isan-karazany, toy ny taratasy kraft, baoritra fotsy, lamba tsy tenona, sns. Fantatrao ve ny fanasokajiana manokana ny kitapo? 1. Kitapo fonosana fampiroboroboana Kitapo fonosana fampiroboroboana dia natao tamin'ny alàlan'ny p ...
Ny maha-zava-dehibe ny fonosana
Product Packaging dia resahina ao amin'ny baoritra, boaty, kitapo, blister, inserts, sticker ary marika sns. Ny Product Packaging dia afaka manome fiarovana mety hisorohana ny vokatra tsy ho simba mandritra ny fizotry ny fitaterana, ny fitehirizana ary ny varotra. Ankoatra ny fiarovana, ny vokatra pa ...